Status Network Token စျေး - အွန်လိုင်း SNT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Status Network Token (SNT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Status Network Token (SNT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Status Network Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $57 269 708.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Status Network Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Status Network Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Status Network TokenSNT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0275Status Network TokenSNT သို့ ယူရိုEUR€0.0233Status Network TokenSNT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0211Status Network TokenSNT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0251Status Network TokenSNT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.248Status Network TokenSNT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.174Status Network TokenSNT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.614Status Network TokenSNT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.103Status Network TokenSNT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0368Status Network TokenSNT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0384Status Network TokenSNT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.616Status Network TokenSNT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.213Status Network TokenSNT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.149Status Network TokenSNT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.06Status Network TokenSNT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.64Status Network TokenSNT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0377Status Network TokenSNT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0416Status Network TokenSNT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.858Status Network TokenSNT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.192Status Network TokenSNT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.91Status Network TokenSNT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩32.7Status Network TokenSNT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.64Status Network TokenSNT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.03Status Network TokenSNT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.762
Status Network TokenSNT သို့ BitcoinBTC0.000002 Status Network TokenSNT သို့ EthereumETH0.00007 Status Network TokenSNT သို့ LitecoinLTC0.000478 Status Network TokenSNT သို့ DigitalCashDASH0.000283 Status Network TokenSNT သို့ MoneroXMR0.000296 Status Network TokenSNT သို့ NxtNXT1.93 Status Network TokenSNT သို့ Ethereum ClassicETC0.00397 Status Network TokenSNT သို့ DogecoinDOGE8.14 Status Network TokenSNT သို့ ZCashZEC0.000291 Status Network TokenSNT သို့ BitsharesBTS1.06 Status Network TokenSNT သို့ DigiByteDGB0.944 Status Network TokenSNT သို့ RippleXRP0.0938 Status Network TokenSNT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00094 Status Network TokenSNT သို့ PeerCoinPPC0.0929 Status Network TokenSNT သို့ CraigsCoinCRAIG12.42 Status Network TokenSNT သို့ BitstakeXBS1.16 Status Network TokenSNT သို့ PayCoinXPY0.476 Status Network TokenSNT သို့ ProsperCoinPRC3.42 Status Network TokenSNT သို့ YbCoinYBC0.00001 Status Network TokenSNT သို့ DarkKushDANK8.74 Status Network TokenSNT သို့ GiveCoinGIVE59 Status Network TokenSNT သို့ KoboCoinKOBO6.11 Status Network TokenSNT သို့ DarkTokenDT0.0253 Status Network TokenSNT သို့ CETUS CoinCETI78.67